Ireland inogona kubhadhariswa faindi nekutadza kutora mitero kubva kuApple | IPhone nhau
Ireland inogona kubhadhariswa faindi yekutadza kutora mitero kubva kuApple
Kwemazuva mashoma anotevera, Ireland inogona kutarisana nezvakanaka nekuti usati waunganidza huwandu unoenderana nemitero yekumashure yeApple.
Maererano ne ruzivo rakaburitswa nhepfenyuro yeBloomberg, European Commission ichatemera Ireland "chiyero chekusateedzera" yekutadza kutora Apple's $ 17.600 bhiriyoni mumitero yekumashure, pahwaro hwokuti Komisheni yakagumisa kuti hurumende yeIreland yakataurirana zvibvumirano nekambani yeCupertino chete izvo zvaiita rubatsiro rusiri pamutemo rwehurumende.
Zvakanaka kuIreland nekusatevedzera zvirango zveEuropean Commission
Chibvumirano chiri mubvunzo chinogona kuitwa pachena pakarepo pavhiki ino, chinyorwa chisingazivikanwe chingadai chakazivisa Bloomberg. Iyi "chiyero chekusateedzera" ichauya iri muchimiro chematare icho, kana chikakundwa nevatongi veEuropean, chinoguma nefaindi yemari iyo ichawedzera kukwidza huwandu hwakazara hwemari yekutanga yaikweretwa.
Musi waNdira 3, Ireland yakakurudzirwa kuti itore mitero kubva kuApple zvakadaro, hurumende yenyika iyoyo yakaramba zvese pachena uye zviri pamutemo.
Vaviri Apple nehurumende yeIreland vanga vachishanda pachikumbiro. Sekureva kweIreland, izvo zvibvumirano zveApple zvaive zviripo kune mamwe makambani. Kune iro chikamu, Apple yakagara ichichengeta kuti inoteerera nemutemo munyika yega yega mainoshanda.
Zvisinei, European Commission yakagumisa kuti inirlanda akagadzira mitemo yaibvumidza Apple kubhadhara zvishoma se0,005% mumitero muna2014. Uye zvakare, iyo kambani yanga iri kubhadhara mabhiriyoni mumari yepasi rose kuburikidza nemaIrish mashandiro Panzvimbo pekubhadhara mitero inoenderana mune yega yega yenyika uko kutengesa kwagadzirwa.
La chikumbiro Apple neIreland zvinogona kuwedzerwa kusvika kumakore mashanu. Panguva ino, mapato ese akaronga hurongwa hwekutsvaga mari umo hurumende yeIreland ichachengetedza mari iyi netariro yekuidzosera kuApple kana vakunda chete, kana zvikazoitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Ireland inogona kubhadhariswa faindi yekutadza kutora mitero kubva kuApple
Iyo firimu yakapfurwa zvachose pa iPhone inowana mazita gumi paTaipei Film Festival
Musi waNovember 2, Apple ichataura nezvekuti chikamu chekupedzisira chemari chakafamba sei